साँझको समय थियो । तर अध्याँरो भइसकेको थिएन । ठ्याक्कै कति बजेको थियो, राम्रोसँग याद भएन । त्यस्तै साँढे ६ जति बजेको थियो होला । म बौद्ध घुम्न गएर कोठातिर फर्कदै थिए । बौद्धबाट म बस्ने ठाँऊ (मण्डिखटार) पुग्नलाई हिँडेर त्यस्तै ४०/४५ मिनेट जति लाग्छ । म एक्लै अलि हतारमै हिँडिरहेको थिँए । संयोगले त्यस दिन विश्वकर्मा पूजा परेको थियो । सबै साना-ठूला कलकारखाना तथा बाईक र गाडी workshop हरुमा तोरण टाँगेर पूजा गरिरहेका थिए । कलकारखानाका कामदारहरु रमाइलो गरिरहेका थिए, धेरैजसो चाँहि जाँडले मात्तिसकेका थिए ।
म ठ्याक्कै महाँकाल चोकमा मुल सडक पार गरेर तेन्जिङ चोकतर्फ हिँडिरहेको थिए । अचानक मान्छेहरु दौडन थाले, सबै भागाभाग गर्न थाले । के भइरहेको हो, मैले केहि बुझ्नै सकिन । दुईजना केटाहरु भाग्दै-भाग्दै मेरै छेऊमा आईपुगे र मलाई पनि "भाग्नुस् दाई" भन्दै दुवैजना त्यहाँबाट भागेर महाँकाल चोकमा रहेको खुल्ला चौरभित्र छिरे । अलि परपट्टि एउटा बाईक workshop थियो । त्यस भित्रबाट टाउकोमा फेटा बाँधेका केटाहरुको एउटा हुल कराउँदै बाहिर निस्केर मै तिर दौडेर आउँन थाले । मैले सोँचे, आज विश्वकर्मा पूजाको दिन सबैजना जाँड खाएर मातेका हुन्छन्, पक्कै पनि Gang Fight परेको हुनुपर्छ । ति फेटा बाँध्ने केटाहरुले त्यो दुईजना केटाहरुलाई कुट्नलाई लखेटेको हुनुपर्छ । तिनिहरुको हातमा पक्कै पनि हतियार होला, मलाई पनि हिर्काउछ होला भन्ने सोँचे, जीऊ नै सिरिङ्ग भएर आयो । त्यहि भएर म पनि ति दुईजना केटाहरुको पछि-पछि भाग्न थाले । पछाडिबाट मान्छेहरु कराउँदै आइरहेका थिए । म पनि पछाडि नहेरिकन दौडन थाले । ति दुईजना केटाहरु चौरको अर्कोपट्टिको गेटबाट निस्केर तिनचुली जाने बाटोतिर भाग्न थाले, म पनि पछि-पछि दौडदै थिए । बाहिर निस्कने गेटैमा एकजना दिदी गेटमा लगाइएको फलामको बार समाएर बसिरहेकी थिएन् । मलाई देख्ने बितिक्कै ति दिदीले, "भाई त्यसरी नभाग्नुस्, माथि रुख लड्न लागिसक्यो!" भनिन् । यसो माथि हेरेको, साँच्चिकै रुख त हल्लिरहेको रहेछ । म त झनै अलमल्ल परे । न त हावा नै चलेको छ, न त कसैले केहि नै गरेको छ, फेरि यो रुख किन यसरी हल्लेको होला ! अगाडितिर रुख हल्लिरहेको छ, पछाडिबाट फेटा बाँधेका केटाहरु आउँदै छन् । के गर्ने के नगर्ने, एकछिन त केहि सोँच्नै सकिन। हत्त न पत्त ति दिदीलाई सोधिहालेछु, "दिदी यहाँ के भाको हो यो ?" ति दिदीले सास अड्काउदै, "भाई भूँ-भूँ-भूँईचाल आउँदै छ, पर्खाल समाएर बस्नुस्" भनिन् । भित्रै अड्किसकेको सास बल्ल बाहिर निस्केर आयो । एकछिन् आनन्दले सास फेरे । अनि यसो भूँईतिर हेरेको केहि पनि महसुस् भएन, सायद भूँईचाल रोक्किसकेको थियो । अनि यसो पछडि फर्केर हेरे, चौरमा टन्नै मान्छे जम्मा भइसकेछ ।
साँच्चिकै भूँईचालो महसुस गर्नेहरुको हालत के भयो होला, त्यो त म भन्न सक्दिन। तर मैले चाँहि भूँईचालो महसुस नै गर्न सकिन, तैपनि एकछिन चाँहि "सात्तो" नै गएको थियो।
सन्दर्भ हो : २०६८ साल असोज १ गते अर्थात सन् 2011 September 18 तारेखको दिन सिक्किमलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदाको मेरो अनुभव । सो भूकम्पले नेपालमा पनि झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरुको ज्यान लिएको थियो ।